ब्लगर आचारसंहिता आवश्यक कुरा हो:प्रभाष घिमिरे - MeroReport
ब्लगर आचारसंहिता आवश्यक कुरा हो:प्रभाष घिमिरे
शिल्पी थियटरको लेखा शाखामा कार्यरत झापाका प्रभाष घिमिरे अहिले बि. बि. एस तेस्रो वर्षका विद्यार्थी हुन् । शिल्पी थियटरका केही प्रस्तुतिहरुमा अभिनय समेत गरिसकेका घिमिरे आफुलाई सिकारु ब्लगर भन्न रुचाउँछन् । पेशाले लेखा क्षेत्रमा रहेपनि रुचिको क्षेत्र भने साहित्य भएको बताउँछन् उनी । लेखा र अभिनयका अलवा उनी सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा हामीले उनै प्रभाष घिमिरेलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरीएको कुराकानी :
प्रभाष घिमिरेलाई के भनेर चिन्ने ?
अहिलेलाई व्यवसायिक विद्यार्थी र साहित्यिक जीवन र सामाजिक सेवामा काम गर्न ईच्छुक भनेर भन्दा हुन्छ ।
साहित्यमा रुचि राख्ने तथा अध्ययन गर्न रुचाउँने मानिस भनेर चिनाउँदा मलाई खुसी लाग्छ ।
ठ्याक्कै समय चाहीँ थाहा छैन तर डेढ वर्ष हुनलाग्यो । लेख्ने प्रयास गर्दै गर्दाको कविताहरु कहाँ राख्ने भनेर सोच्दा मान्छेहरुले ब्लगमा आफ्नो विचार, लेख, कथा, निबन्ध, कविता राख्छन् भन्ने थाहा पाए पछि यो शुरु गरेको हुँ ।
के का लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ ?
आफ्ना कुरा, विचार, मनमा लागेका कुराहरु अरुलाई सुनाउनका लागी ब्लगिङ गर्छु ।
कविता र संस्मरणहरु राख्न मनपर्छ ।
तपाँइले चलाउने ब्लग http://pravaskokuna.blogspot.in मात्रै कि यस बाहेक अरु पनि छन् ?
यो मात्रै हो ।
गाह्रो चाहीँ रैछ तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ निरन्तर गरिरहेको छु ।
ब्लगिङको क्षेत्रमा म नयाँ हुँ अझ भनौ सिकारु हुँ । यस सम्बन्धी मलाई त्यति धेरै थाहा छैन । त्यसैले सदुपयोग नै भन्नुपर्छ ।
पढ्छु । कुन-कुन भन्ने चाँही छैन । तर प्राय: म जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित छन् भने पढ्छु । समाज परिवर्तनसँग सम्बन्धित विचारको ब्लग पढ्न बढी रुचि लाग्छ ।
मैले पढ्ने गरेका प्राय ब्लग सामाजिक हित मै भएको पाएको छु ।
ब्लगर आचारसंहिता आवश्यक कुरा हो ।
अहिलेसम्म त्यस्तो आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्ने थाहा पाएको छैन ।
तपाँइ सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो ?
फरक र समानता दुबै छ । सबैको आ-आफ्नो विशेषता छ । ट्वीटर र ब्लग अली विकसित ठाउँमा चलाउँछन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने ग्रामीण भेगमा यी दुवै कुरा धेरैलाई थाहा छैन । फेसबुक भने अहिले शहर तथा ग्रामिण दुबै क्षेत्रमा प्रचलित भैसक्यो । अनि फेसबुक साथिभाई तथा आफन्तको जमघट गर्ने थलो जस्तो भएको छ ।
हो, ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिता भन्न सकिन्छ किनकी आफ्नो ठाँउको सुचना दिन जसले नि पाउँछ नि अनि ब्लग पनि सुचना आदानप्रदान गर्ने थलो भएको छ ।
Comment by Amuna Chapagain on November 12, 2014 at 4:47pm
बधाई छ प्रभाष ।